१५ बर्षपछि यस्ताे अबस्थामा भेटिईन बिष्णु माझी!अब मिडियामा सार्वजनिक हुदै!(भिडियो सहित) |
१५ बर्षपछि यस्ताे अबस्थामा भेटिईन बिष्णु माझी!अब मिडियामा सार्वजनिक हुदै!(भिडियो सहित)
August 27, 2021 adminLeaveaComment on १५ बर्षपछि यस्ताे अबस्थामा भेटिईन बिष्णु माझी!अब मिडियामा सार्वजनिक हुदै!(भिडियो सहित)
१५ बर्षपछि यस्ताे अबस्थामा भेटिईन बिष्णु माझी! अब मिडियामा सार्वजनिक हुदै!(भिडियो सहित) १५ बर्षपछि यस्ताे अबस्थामा भेटिईन बिष्णु माझी! अब मिडियामा सार्वजनिक हुदै!“सालको पातको टपरी” विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको यो लोकदोहोरी गीत अहिले नेपाली संगीतप्रेमीको जिब्रोमै झुण्डिएको छ । यूट्युवमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युज पाएको लोकदोहारी हो यो।गीतले डेढ करोड भ्युज कटाएपछि केही दिनअघि ‘सेलिब्रेसन’ कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्ष/ परोक्ष गाँसिएका सबै उपस्थित थिए, सिवाय गायिका विष्णु माझी।
कार्यक्रम आयोजकले विशेष कारणले विष्णु कार्यक्रममा आउन नसकेको स्पष्टीकरण दिए, उनको अनुपस्थिति अपेक्षित नै थियो । झण्डै डेढ दशकदेखि लोक गायनमा सक्रिय यी प्रख्यात गायिका आजसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन् ।विष्णुलाई आफ्नै श्रीमानले बन्धक बनाएर राखेका छन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको लामो समय भयो । यो चर्चा सत्यसँग नजिक छ वा छैन भन्नेचाहिँ आजसम्म रहस्यमै छ । यो सत्य हो वा असत्य कसैले भन्न सकेका छैनन् । भन्ने चाहिँ गरेका छन् । कि बिष्णु माझी बन्दक छिन् ।
अहिले एक–दुईवटा गीत हिट हुनासाथ गायक–गायिकाहरुलाई स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रमहरुमा निम्तो आउन थाल्छन् । चलेका गायक–गायिकाहरुका लागि त विदेश यात्रा पानी पँधेरो धाएजत्तिकै हुन्छ । यस हिसाबले सयौं हिट गीत दिएकी विष्णु पनि देश–विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त रहनुपर्ने हो ।तर, उनले अहिलेसम्म विदेशमा पाइला पनि टेकेकी छैनन् । स्वदेशकै मेला–महोत्सवमा पनि उनी पुग्दिनन् । जब कि उनको सबैतिर चर्को डिमान्ड छ ।
अहिलेकी नम्बर १ लोकगायिका मानिने विष्णु रहस्यपूर्ण र गुमनाम जीवन बाँचिरहेकी छन् । उनीसँग एउटा मोवाइल पनि छैन भन्ने गरिन्छ । गीत गाउन स्टुडियो धाउनेबाहेक अन्यत्र कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्नन् । घरबाट बाहिर निस्किँदा पछ्यौरी र मास्कले अनुहार ढाक्छिन् भन्ने गरिन्छ । स्टुडियोमा छिर्नासाथ पहिले झ्यालको पर्दा लगाउँछिन्, अनि मात्र गाउँछिन् भन्न गरिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको नामोनिशान छैन । १५ बर्ष यता आजसम्म एकचोटि पनि सञ्चारमाध्यममा आएकी छैनन् उनी । के छ तेस्तो रहस्य बिष्णु मा कोहिले खुलाउन सक्दैनन् ।काठमाडौंमा उनी कहाँ बस्छिन्, कसैलाई थाहा छैन । थाहा हुनेहरु पनि बताउन चाहँदैनन् । स्याङ्जास्थित माइतीघरमा पनि उनी नपुगेको धेरै भइसकेको बताइन्छ ।
कर्णप्रिय स्वरकी धनी गायिकाको फ्यान फलोइङ भने ठूलो छ । यूट्यूवमा विष्णुका गीतमा कमेन्ट गर्ने धेरैले उनको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखिरहेका हुन्छन् । उनलाई मिडियामा आउन फ्यानहरुले निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन् ।
निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागिसक्यो?भर्खरै आयो अप्रत्याशित खबर।
कक्षा १२ को परीक्षा हुने,यसरी ताेकियाे परीक्षा सञ्चालन गर्ने मिति
घरविदामा हिडेका नेपाली सेना घर नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाए!मनमा अलिकति दया भए(RIP)लेख्नुहोला!
देउवा सरकारले लियो अहिलेसम्मकै जोखिमपूर्ण निर्णय, को-को जाने भए जेल?
तपाईलाई थाहा छ?महिलाहरुले ब्लाउजभित्र पैसा घु’साएर किन राख्छन्?